Macluumaadka Shirkadda - Soo-dhoofinta iyo dhoofinta CO., LTD
Dhammaan alaabooyinkeenna waxaa lagu oggolaaday shahaadooyinka CE, ISO, FDA siday u kala horreeyaan.
Wax soo saarkayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah sida soo socota:
Sirinji la tuuro: Siliingaha la diyaariyey, irbadda hypodermic, faleebada loo dejiyey, xididka xididdada madaxa, IV cannula, dhiiga laabta dhiigga, maqaarka madaxa, tubbada aruurinta dhiigga ee faakiyuumka, bacaha dhiigga, bacaha kaadida.
Gacmo gashi la tuuro: sida galoofyada cinjirka ah, galoofyada nitrile, galoofyada vinylka iyo galoofyada PE.
La tuuro waxyaabaha aan tolmo wanaagsan lahayn: sida maaskaro wajiga, daboolka kabaha, Koofiyadaha Mob, koofiyadaha Bouffant, koofiyadaha qalliinka, goonnada, gogosha, sariirta sariirta, suufka hoostiisa, gacmo gashi iwm.
Labiska Caafimaadka: oo ay ka mid yihiin faashado dhejis ah oo laastik ah, faashaddo isku dheggan, PE, cajalado aan tolmo lahayn iyo Zinc Oxide cajalado, balastar nabar, malaas iwm.
Sahayda daaweynta baxnaaninta: sida kursiga korantada korontada, kuraasta curyaamiinta aluminium, kursi curyaanka birta ah, kuraasta curyaamiinta ee commode, commode, go-cart, curcurka iyo ulo iwm.
Xirmooyinka tijaabada cudurka: sida baaritaanka uurka, baaritaanka ugxaanta, HIV, HAV, HCV, Malaria, H-pylori, iwm.
Qalabka ilkaha: oo ay ku jiraan siriinjyada ilkaha, wiishka candhuufta, qasabadaha laba jibbaaran, labalaabka dhammaaday ilkaha, stomatoscope iwm.
Wax soo saarka cudurada dumarka: sida baaritaanka xubinta taranka haweenka, suufka, suufka kaadida, burushka afka ilmo galeenka, qaadada afka ilmagaleenka, buro afka ilmo galeenka, daawada jirka ku jirta ee loo yaqaan 'endometrial nuugida curette,'
Alaabada farmashiyaha: sida kormeeraha cadaadiska dhiiga, mitirka Gulukooska, foodda hore iyo heerkulbeegyada Dijital ah, Fingertip oxymeter, Qalabka saabuunta otomaatiga ah.
Noqoshada shirkad aad u wanaagsan oo dhammaan macaamiisha ay aaminaan oo shaqaaluhu jecel yihiin!
Caawinta shaqaaluhu inay koraan oo wada shaqeeyaan si loo abuuro dhalaal!
Dabeecad: caafimaad, isku kalsooni, daacadnimo, wadaagid, mahadnaq! Ficil: xirfad, hufnaan, shaqo kooxeed, xamaasad, iyo guul-guul!